Homeလေလံပွဲလေလံရလဒ်များကိုKonya - Yenice Tepeköyလိုင်းမူကွဲနှင့် Musella Superstructure အလုပ်လုပ်တင်ဒါရလဒ်များ၏လုပ်ခြင်း
25 / 02 / 2018 Levent Ozen လေလံရလဒ်များကို, လေလံပွဲ, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, တူရကီ 0
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Konya - Yenice လိုင်းTepeköyမူကွဲပြီးတော့ဖျော်ဖြေ Musella ထိပ်တန်းဆောက်လုပ်ရေး 30 / 12 / 2017 Konya - Yenice လိုင်းTepeköyမူကွဲပြီးတော့ Musella Superstructure အလုပ်လုပ် TCDD6ဖျော်ဖြေ။ ဒေသန္တရရုံး "Konya ၏6TCDD ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု - Yenice လိုင်းTepeköyမူကွဲပြီးတော့ Musella ထိပ်တန်းအမှတ် 4734 19 ၏ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ဆောက်လုပ်ရေးဖျော်ဖြေပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2017 / 700905 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Kurtulus ခရိုင် Ataturk ရိပ်သာလမ်း 01120 Seyhan SEYHAN / ADANA ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3224536914 - 3224575807 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: xnumxbolgemudurlugu@tcdd.gov.t သုံးခုသည်) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်း ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လက်ဝါးကပ်တိုင်Sekidüzဆင်ခြေဖုံး၏ Senyurt Mardin စခန်းများတင်ဒါ Making ၏ကြားဖြတ် Spent စီစဉ်ထား Load Center ကအခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် superstructure အကျင့်ကိုကျင့် 12 / 10 / 2012 ရထားလမ်းအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်ပလက်ဖောင်းပေါ်ဝယ်ယူရေးအသိပေးစာ TCDD6အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒေသန္တရရုံး Senyurt လက်ဝါးကပ်တိုင်Sekidüz Klm အပန်းဖြေစခန်း၏ Mardin စခန်းများ။ 11 + 115-12 + 825 ရရှိသောယာယီစီစဉ်ထား Load ရေးစင်တာဖွဲ့စည်းခြင်းပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေပြုသောအမှုဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 4734 အမှတ် 19 အပိုဒ်၏အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် superstructure အကျင့်ကိုကျင့်ဘို့လိုအပ်နေဖြင့်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည်ကြားမှာ။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2012 / 136571 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: လွတ်မြောက်ရေးရပ်ကွက်Atatürk Caddesi 01240 SEYHAN / ADANA ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3224575354 - 3225475807 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: xnumxbolgetasinmazmallarmudurlugu@tcdd.gov.t ဃ) တင်ဒါ ...
TCDD Mersin, TCDD2က Ultra နည်းပညာကုမ္ပဏီ၏ Kayseri BoğazköprüUlukışla Yenice Yenice Adana Toprakkale လိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစီမံကိန်းဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါ။ နှင့်3။ မိမိအစိတျအပိုငျးအတှကျရလဒ်များ၏ ... 14 / 03 / 2013 TCDD Mersin, TCDD2က Ultra နည်းပညာကုမ္ပဏီ၏ Kayseri BoğazköprüUlukışla Yenice Yenice Adana Toprakkale လိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစီမံကိန်းဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါ။ နှင့်3။ တူရကီပြည်နယ်မီးရထား၏အစိတ်အပိုင်း၏ရလဒ်သည်မိမိအယူခံ (TCDD) စုဆောင်း 01 ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 တစ်ရက်ဟာယယဇ်ပူဇော်၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုငြင်းဆန်ခဲ့သည် "Kayseri - Boğazköprü - Ulukışla - Yenice, Mersin - Yenice - Adana - ၏ Toprakkale လိုင်းဖြတ်သည့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား်ဆောင်မှုများတည်ထောင်ဆောက်လုပ်ရေး" ဟုအဆိုပါတင်ဒါ အကြောင်းကိုအသစ်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, Ultra-နည်းပညာကုမ္ပဏီ၏ TCDD2ဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါ။ နှင့်3။ သူကသူ့အယူခံဝင်များ၏ရလဒ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုမှငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ဒီအဆင့်မှာက Ultra ...
TCDD Mersin, TCDD2က Ultra နည်းပညာကုမ္ပဏီ၏ Kayseri BoğazköprüUlukışla Yenice Yenice Adana Toprakkale လိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစီမံကိန်းဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါ။ နှင့်3။ မိမိအစိတျအပိုငျးအတှကျရလဒ်များ၏ ... 18 / 03 / 2013 TCDD Mersin, TCDD2က Ultra နည်းပညာကုမ္ပဏီ၏ Kayseri BoğazköprüUlukışla Yenice Yenice Adana Toprakkale လိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစီမံကိန်းဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါ။ နှင့်3။ တူရကီပြည်နယ်မီးရထား၏အစိတ်အပိုင်း၏ရလဒ်သည်မိမိအယူခံ (TCDD) စုဆောင်း 01 ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 တစ်ရက်ဟာယယဇ်ပူဇော်၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုငြင်းဆန်ခဲ့သည် "Kayseri - Boğazköprü - Ulukışla - Yenice, Mersin - Yenice - Adana - ၏ Toprakkale လိုင်းဖြတ်သည့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား်ဆောင်မှုများတည်ထောင်ဆောက်လုပ်ရေး" ဟုအဆိုပါတင်ဒါ အကြောင်းကိုအသစ်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, Ultra-နည်းပညာကုမ္ပဏီ၏ TCDD2ဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါ။ နှင့်3။ သူကသူ့အယူခံဝင်များ၏ရလဒ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုမှငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ဒီအဆင့်မှာက Ultra ...
TCDD, အီး + M - Ayko လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီနှင့် Siemens ဖက်စပ် Kayseri ကုမ္ပဏီတစ်ခုက - Boğazköprü - Ulukışla - Yenice, Mersin - Yenice - Adana - Toprakkale လိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစီမံကိန်း ... 23 / 05 / 2012 တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) စုဆောင်း 01 ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 တစ်ရက်ဟာယယဇ်ပူဇော်၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု, "Kayseri - Boğazköprü - Ulukışla - Yenice, Mersin - Yenice - Adana - ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်၏ Toprakkale လိုင်းဖြတ်သည့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား Facility တည်ထောင်" ဟုအဆိုပါဝယ်ယူရေးနှင့်စပ်လျဉ်းအသစ်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, TCDD, အီး + M - Ayko လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီနှင့် Siemens ဖက်စပ် ကုမ္ပဏီနု၏ရလဒ်များကိုနှင့် ပတ်သက်. ၎င်းတို့၏ဆန္ဒပြပွဲမှတုန့်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီကကန်ထရိုက်များအတွက်တင်ဒါအနိုင်ရသွားလျှင်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအေဂျင်စီ (PPA) ၏ကုမ္ပဏီအတွက် 10 ရက်ပေါင်းမှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြအရာရှိများကကန့်ကွက်ပါဘူးဖိတ်ခေါ်ခဲ့လိမ့်မည်။ အနီးစပ်ဆုံးကုန်ကျစရိတ် 1 ။ စိတျအပိုငျးအဘို့အ ...
ဝန်ကြီးချုပ်မြန်ရထား၏ Kayseri ယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရား
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: အော်တိုမန်အင်ပါယာ၏ဖေဖော်ဝါရီလ 26 1913
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Konya - Yenice လိုင်းTepeköyမူကွဲပြီးတော့ဖျော်ဖြေ Musella ထိပ်တန်းဆောက်လုပ်ရေး
TCDD Mersin, TCDD2က Ultra နည်းပညာကုမ္ပဏီ၏ Kayseri BoğazköprüUlukışla Yenice Yenice Adana Toprakkale လိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစီမံကိန်းဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါ။ နှင့်3။ မိမိအစိတျအပိုငျးအတှကျရလဒ်များ၏ ...
TCDD Kayseri - Boğazköprü - Ulukışla - Yenice, Mersin - Yenice - Adana - Toprakkale လိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစီမံကိန်း Sahin Yilmaz - Emre ရထားဖက်စပ်နူးညံ့5။ အဘို့အစိတျအပိုငျးမြား၏ရလဒ် ...
TCDD Kayseri - Boğazköprü - Ulukışla - Yenice, Mersin - Yenice - Adana - Toprakkale လိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစီမံကိန်း Sahin Yilmaz - Emre ရထားဖက်စပ်နူးညံ့5။ စိတျအပိုငျး၏ရလဒ်များကိုများအတွက် Kiki ...
TCDD Kayseri - Boğazköprü - Ulukışla - Yenice, Mersin - Yenice - Adana - ။ Toprakkale လိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစီမံကိန်း 1, 2,3။ နှင့်5။ ဘုတ်အဖွဲ့ခွင့်ပြုချက်တင်ဒါအပိုငျး၏ရလဒ်ကိုများအတွက်မျှော်လင့်ရပါတယ်
TCDD Kayseri - Boğazköprü - Ulukışla - Yenice, Mersin - Yenice - Adana - Toprakkale လိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစီမံကိန်းက Ultra နည်းပညာကုမ္ပဏီ 1 ။ သူကနူးညံ့သောစိတျအပိုငျး၏ရလဒ်များကိုများအတွက် JCC ဖို့တောင်းဆိုတဲ့အတွက်